Wargeys Laga Leeyahay Mareykanka oo Sheegay In Dowladdoodu Gumaad Ka Geysatay Soomaaliya. – Shabakadda Amiirnuur
November 30, 2017 9:08 am by admin Views: 306
Iyadoo warbaahinta Mareykanka ay bilihii lasoo dhaafay baahinayeen warar ay ku marin habaabinayeen dhacdooyinkii gumaadka ahaa ee ay ciidamada dalkaasi ka geysanayeen Soomaaliya ayuu maanta mid kamid ah jaraa’idka wadankaasi wax ka qoray arrimahaas.
Wargeyska lagu magacaabo Daily Besat ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Mareykanku uu xad gudubyo ka geystay Soomaaliya isagoo beegsaday dad aan hubeysnayn oo danahooda khaaska ah ku mashquulsan.
Dhacdadii 25-kii August ee Bariire ayuu wargeysku muujiyay iney ahayd mid ula kac ah ayna ka wareysteen 3 qof oo ka badbaaday, taliyihii ciidamada dowladda iyo kii askarta Uganda.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in wariyaal u shaqeeya wargeyska ay Muqdisho kula kulmeen saraakiil kamid ah sirdoonka dowladda, siyaasiyiin iyo mas’uuliyiin kale kuwaasoo codsaday inaan magacooda iyo muuqaalkooda la bidhaamin islamarkaana sheegay in ciidamada gaarka ee Mareykanku ay si ula kac ah u dileen 10 kii qof ee Muslimiinta ah ee lagu gumaaday Bariire.
Kadib gumaadkii Bariire, diblumaasiyiin Mareykan ah ayaa waxay la xiriireen dowladda federalka ah iyagoo ku cadaadiyay iney qariso natiijada baaritaankii la sameeyay dhacdada kadib, illaa iyo haddana dowladdu waxba kama oran arrintaas.
Eng Yariisow iyo Wargeyska Daily Besat
Eng: C/raxmaan Cumar Yariisow oo ah wasiirka warfaafinta ee DF ayaa wax yar kadib dhacdadii Bariire sheegay in dadkii marrasta ahaa ee la gumaaday ahaayeen Al-Shabaab, waxaana ku dhacday fadeexad weyn kadib markii meydadka dadkaasi la geeyay Muqdisho saxaafaddana loo soo bandhigay.
Yariisow kama aanu gilgilan ceebta ku dhacday mana dhicin inuu raali galin ka bixiyo xad gudubka uu ku kacay, waxaana isagoo sidiisii u aamusan dhacdadii maanta qiraya warbaahinta kuwii uu u ceeb qarinayay ee maatida gumaaday, tanina waxay muujineysaa heerka ay madaxda dowladda ka taagan yihiin dadnimada iyo mas’uuliyad xumada.
Mareykanka ayaa sannadkan Soomaaliya ka geystay gumaad uu kula kacay dad abriyo ah waxaana kamid ah dhacdadii degaanka Sh Axmad Yare oo jilib u dhow oo uu ku dilay 7 qof oo isku qoys ah, dhacdadii Daaru-salaam oo uu ku dilay 3 qof oo beeraley ah iyo kuwa kale.